Levitika 15 - Ny Baiboly
Levitika toko 15
Loton'ny lehilahy sy ny vehivavy.
1Ary niteny tamin'i Moizy sy Aarona Iaveh nanao hoe:
2Mitenena amin'ny zanak'Israely ary lazao aminy hoe: Ny lehilahy rehetra marary mitsika, dia maloton'izany. 3Ary izao no loto avy amin'ny fitsihany: na mandeha avy amin'ny nofony ny fitsihany, na mijanona ao, dia loto izany. 4Haloto avokoa ny fandriana handrian'izay mitsika, haloto ny zavatra hipetrahany. 5Izay mikasika ny fandriany dia hanasa ny fitafiany sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-paharivan'ny andro. 6Izay mipetraka amin'ny zavatra nipetrahan'ny olona mitsika, dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-paharivan'ny andro. 7Izay mikasika ny tenan'ny marary mitsika dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-paharivan'ny andro. 8Izay olona madio raha voaroran'ny marary mitsika dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-paharivan'ny andro io olona io. 9Haloto avokoa ny lasely nitaingenan'ny marary mitsika. 10Izay mikasika ny zavatra natao teo ambaniny, haloto mandra-paharivan'ny andro, ary izay mitondra izany, dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano, ary haloto mandra-paharivan'ny andro. 11Izay voakasiky ny marary mitsika ka tsy nanasa tànana tamin'ny rano, dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-paharivan'ny andro. 12Ny vilany tany rehetra voakasiky ny marary mitsika, hovakina, ary ny tavy hazo rehetra kosa hosasana amin'ny rano. 13Rahefa sitrana amin'ny fitsihany ilay marary mitsika hanisa andro fito aloha amin'ny fidiovany, vao hanasa ny fitafiany sy handro amin'ny rano velona, dia hadio. 14Amin'ny andro fahavalo hitondra domohina roa na vanto-boromailala roa izy, ka hankeo anatrehan'ny Tompo, eo anoloan'ny varavaran'ny trano lay fihaonana, ary homeny ny mpisorona izany. 15Ary ny mpisorona hanatitra azy ireo, ny iray hatao sorona noho ny ota, ny iray hatao sorona dorana. Ny mpisorona hanao ny fanonerana ho azy, eo anatrehan'ny Tompo, noho ny fitsihany. 16Raha misy lehilahy mandeha rano maloto, dia hampandro amin'ny rano ny tenany manontolo, ary haloto izy mandra-paharivan'ny andro. 17Ny fitafiany rehetra sy ny hoditra voakasik'izany koa hosasana amin'ny rano sy haloto mandra-paharivan'ny andro. 18Raha misy vehivavy nandry tamin-dehilahy sy niray taminy, dia handro amin'ny rano izy sy ralehilahy, ary haloto izy ireo mandra-paharivan'ny andro.
19Raha misy vehivavy mararin'ny fadim-bolany, fitsihan'ny rà amin'ny tenany, dia haloto hafitoana izy. Ny olona rehetra hikasika azy, haloto mandra-paharivan'ny andro; 20ny zavatra rehetra handriany mandritra ny fotoana ahalotoany dia haloto, ary ny zavatra rehetra hipetrahany haloto koa; 21izay rehetra hikasika ny fandriany hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-paharivan'ny andro. 22Izay rehetra hikasika zavatra nipetrahany, hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-paharivan'ny andro. 23Raha misy zavatra eo amin'ny fandriany, na eo amin'ny seza nipetrahany, dia haloto mandra-paharivan'ny andro izay mikasika izany. 24Raha misy lehilahy mandry aminy, ka mankeo aminy ny fahalotoan'io vehivavy io, dia haloto hafitoana izy ary izay farafara rehetra handriany dia haloto avokoa.
25Raha misy vehivavy mitsi-drà mandritra ny andro maro, ivelan'ny fotoan'ny fadim-bolana, na ny fadim-bolany no mandeha lava, mihoatra ny fotoana fahalotoany, dia haloto mandritra izay andro rehetra itsihany izy, toy ny amin'ny fotoana aharariany isam-bolana ihany.
26Ny fandriana rehetra handriany mandritra izany fitsihany izany ho toy ny fandriany amin'ny fitsihany isam-bolana ihany; ny zavatra rehetra hipetrahany, haloto toy ny amin'ny fotoan'ny fahalotoany amin'ny fadim-bolana. 27Izay rehetra hikasika izany, haloto ka hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-paharivan'ny andro. 28Rahefa sitrana amin'ny fitsihany izy, dia hanisa andro fito aloha, ary rahefa afaka izany, hadio izy. 29Amin'ny andro fahavalo haka domohina roa izy, na vanto-boromailala roa, ka hitondra ireo amin'ny mpisorona eo anoloan'ny varavaran'ny trano lay fihaonana. 30Dia hatolotry ny mpisorona ireo: ny iray hatao sorona noho ny ota, ny iray hatao sorona dorana, ary ny mpisorona hanao ny fanonerana ho azy, eo anatrehan'ny Tompo, noho ny fitsihany izay nahaloto azy.
31Ampianaro hidio amin'ny fahalotoany ny zanak'Israely, sao ho faty noho ny fahalotoany izy, amin'ny fandotoany ny Fonenako izay eo afovoany.
32Izany no lalàna momba ny lehilahy mitsika na voaloton'ny fandehanan'ny rano malotony, 33sy momba ny vehivavy mararin'ny fadim-bolany, mbamin'ny olona rehetra mitsika, na lahy na vavy, sy ny lehilahy mandry amim-behivavy maloto. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0553 seconds